Ukuzila, imfihlo yobusha nempilo enhle - Afrikhepri Fondation
Theukubaluleka kokuphuza okungenani amalitha amabili amanzi ngosuku. Umzimba uqukethe 70% wamanzi. La manzi abalulekile kubo bonke izinqubo ezibalulekile et
igcina ivolumu yegazi kanye lymph
inikeza umuthi ovumela ukudla okugwinya
isebenza njenge-lubricant for joints namahlo
silondoloze ukushisa komzimba
kuvumela ukusabela kwamakhemikhali kumaseli
kuvumela ukumuncwa kanye nokuthuthwa kwezakhi zomzimba
ivumela umsebenzi wezinzwa wobuchopho
kuqinisekisa isikhumba samanzi
ukuqeda imfucuza kusuka ekugayeni kanye nezinqubo ezihlukahlukene zemethamo
Izinzuzo zokuzila nokuzindla
Kusukela ezikhathini zasendulo, odokotela bahlobanisa ukuzila nokwelashwa kwezifo ezithile. Ngaphezu kwalokho, ukuzila ukudla kuzonciphisa ukuguga kobuchopho futhi kuvikele inkumbulo nemisebenzi yokufunda. Ngempela, ngokulwa nengcindezi ye-oxidative, ukuzila ukudla kungavimbela ukuguga.
Le ngokuzila ukudla cishe enye yezindlela ezindala kunazo zonkeukuphulukiswa. Ngisho emvelweni, izilwane ziyeka ukuzidla uma zigula noma zilimazekile. Ukuzila ukudla kuqukethe ukugwema konke ukudla (okuqinile neketshezi), ngaphandle kwalokhuamanzi, isikhathi eside noma esifushane ukuze uphumule, ukuxosha futhi ukuvuselela umzimba. Ngokusho kwabasekeli bakhe, ukuzila ukudla kuzosiza ukugcina okuhle impilokanye nokudla okunempilo, ukuzivocavoca umzimba nokulinganisela ngokomzwelo.
Abantu abahamba ngokuzila ukudla bavamise ukukwenza ukuze "bahlanze" noma banikeze umzimba izimo ezifanele zokuphulukiswa. Bekulokhu kuhlotshaniswa nemikhuba engokomoya noma yenkolo. Kungabuye kunikeze umuzwa we ukucaca kwengqondo.
Kubalulekile, phakathi nosuku lokuzila, hhayi kuphela ukungadli kodwa nokuba nesimo sengqondo esihle nomoya usuku lonke. Lokhu kuqinisekisa ukuthi lolu suku luhambisana nokuzilolonga ngokomoya futhi kuthuthukisa ukukhula ngokomoya. Vuka ngaphambi kokuntwela kokusa bese uzindla futhi uthandaze ihora eli-4 ngaphambi kokuphuza ingilazi enkulu yamanzi bese uqala imisebenzi yakho yansuku zonke. Usuku lonke, wondla umphefumulo wakho ngemicabango emihle futhi uphuze njalo. Yidla ukudla ngabo-1-18 ntambama
Isibonelo sokwelashwa phakathi nezinsuku ze-40:
Isaladi isidlo esakhiwe:
i-spirulina glitter (kancane)
amanzi anamandla +
Aloa vera (okuncane)
i-royal jelly (kancane)
Ukuzila okungapheli kanye nokudla kwe-Ketogenic: 2 amakhilogremu ku-1 ukunciphisa isisindo ngokushesha futhi uthuthukise ...
Igcine ukubuyekezwa ngoJuni 21, 2021 7:53